Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud iyo Wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray wadanka Belguim, kadib kulankii Addis ababa.
Addis ababa– Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maaalintii labaad ka qeyb galay shirka Midowga Africa uga socda Addis Ababa kaasi oo ay hogaamiyayaasha afrika uga hadleen arrimo badan.
Madaxweyne Xassan Sh. Maxamud iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa caawa waxey u dhoofeen Xarunta Midowga Yurub (EU) ee Brussels kadib markii uu Madaxweynaha ka helay casuumaad rasmi ah ururka Midowga Yurub. Madaxweynaha ayaa wuxuu kulamo la qaadan doonaa Madax kala duwan ee ka tirsan Midowga Yurub (EU)
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa la filayaa in ay maalinta jimcaha ah soo gaaraan Magaalada London Xarunta Wadanka Britain halkaasi oo uu kula kulmi doono Madaxda Sare ee wadanka Britain oo uu ka mid yahay Ra iisal wasaare David Cameron.
« U.S. to Expand Role in Africa Military Pact With Niger Brings American Forces Closer to Conflict in Mali
Muqdisho: Dadka Noloshooda Ku Xiran Tahay Dhimashada oo Hadlay »